Gravityzone လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေး - Bitdefender Myanmar
Gravityzone လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေး
Physical, Virtual နှင့် Cloud ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အလွှာလိုက်ဖြစ်သော မျိုးဆက်သစ် လုံခြုံမှု
သင်၏ ရုံး၊ Datacenter နှင့် Cloud တို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော endpoint လုံခြုံရေး Solution
Bitdefender ၏ လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေးသည် သီးခြား စစ်ဆေးမှုများတွင် တသမတ်တည်း ပထမအဆင့် ချိတ်သည့် အလွှာလိုက်ဖြစ်သော မျိုးဆက်သစ် လုံခြုံမှု ကို ပေးသည်။ ၎င်းသည် endpoint အားလုံးအတွက် စိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးရန် တစ်ခုတည်းသော ထိန်းချုပ်မှု platform ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
လုပ်ငန်းသုံးလုံခြုံရေးသည် အဖွဲ့အစည်များအား Datacenter, Physical Endpoint များ , မိုဘိုင်းစက်များ နှင့် Exchange မေးလ်ဘောက်စ်များအတွက် မည်သည့်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြန့်ကျက်ရန်ရွေးချယ်ရာတွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်ခြင်းနှင့်အတူ ကောင်းမွန်သော လုံခြုံမှုကို တတ်စွမ်းစေနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအား စွမ်းအားမြင့် on-premise GravityZone ထိန်းချုပ်စင်တာ console မှ ချောမွေ့စွာထိန်းချုပ်ပေးသည်။
အဆင်ပြေသော လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေး Solution
စွမ်းအားမြင့် on-premise GravityZone ထိန်းချုပ်စင်တာ console တစ်ခုတည်းမှနေ၍ မည်သည့် endpoint သို့မဟုတ် မေးလ်ဘောက်စ် အရေအတွက်မဆို သင် ဖြန့်ကျက်ချင်သော လုံခြုံရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ရွေချယ်ပြီး ကာကွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ။
ရုံးများ နှင့် Datacenter များအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှု
Bitdefender သည် အနည်းဆုံး အရင်းအနှီးသုံးစွဲမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ၊ စုစည်းမှုအချိုးအစားများ နှင့်အတူ ရုံးများ နှင့် datacenter များအတွက် ဦးဆောင် မျိုးဆက်သစ် ကာကွယ်မှုကို ပေးသည်။
Endpoint များ အတွက် GravityZone လုံခြုံရေး
Ransomware, Phishing data အပါအဝင် အရှုပ်ထွေးဆုံးသော ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများကို အံတုကာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် laptop များကို ကာကွယ်ရန် သီးခြား စစ်ဆေးမှုများတွင် တသမတ်တည်း ပထမအဆင့် ရှိသည့် လုံခြုံရေးကို ဖြန့်ကျက်ပေးသည်။
Virtualized ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် GravityZone လုံခြုံရေး
Datacenter များအား Virtualized နှင့် Hyper-converged ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက် အောက်ခြေမှစ၍ တည်ဆောက်ထားသော စိတ်ချရသည့် လုံခြုံရေး Solution တစ်ခုဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသည်။ Virtualized ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လုံခြုံရေးသည် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု စုစည်းအချိုးအစား နှင့် အက်ပလီကေးရှင်း တုံပြန်ကြာချိန်များအပေါ် သေချာစိတ်ချစေသည်။
မိုဘိုင်းစက်များအတွက် GravityZone လုံခြုံရေး
အိုင်တီ ရောနှောယှက်နွယ်မှု နှင့် အားထုတ်မှုအား လျော့နည်းအောင်လုပ်စဉ် အဖွဲ့အစည်းများ လိုက်နာမှုကို စောင့်ထိန်းရန် ကူညီသည့် မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးအပေါ် ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြုထားသည်။ GravityZone ထိန်းချုပ်စင်တာ တွင် တင်းကြပ်စွာပေါင်းစည်းထားသောကြောင့် ၎င်းမှာ ထိန်းချုပ်သူများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ပိုစေသော “နောက်ထပ် Solution” မဟုတ်ပေ။
Exchange အတွက် GravityZone လုံခြုံရေး
ဦးဆောင်နေသော antispam နှင့် antimalware နည်းပညာများ နှင့်အတူ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Exchange မေးလ်ဆာဗာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ စိတ်ချရသော အီးမေးလ် လုံခြုံရေးသည် စတင်ရန် နှင့် ဖြန့်ကျက်ရာတွင် မြန်ဆန်ပြီး တူညီသော GravityZone ထိန်းချုပ် စင်တာ Console မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
GravityZone ၏ ပေါင်းစည်းထားသော Patch အုပ်ချုပ်မှု Add-on
Unpatched စနစ်များသည် အဖွဲ့အစည်းများအား malware တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားမှုများနှင့် အချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ချေကို များစေသည်။ သင့် OS နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများအား Windows အခြေပြုသွင်းထားသော ကွန်ပျူတာများ၊ physical ဆာဗာများ နှင့် virtual ဆာဗာများ အလုံးစုံတလျှောက် GravityZone Patch အုပ်ချုပ်မှု နှင့်အတူ update ဖြစ်နေစေသည်။
GravityZone ၏ ပေါင်းစပ်ထားသော Disk အပြည့် စာလုံးဝှက်ခြင်း Add-on
Windows ၏ Bitlocker နှင့် Mac ၏ FileVault မှ ထောက်ပံ့ထားသော စာလုံးဝှက်ခြင်း mechanism များ နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် endpoint ၏ hard drive တစ်ခုလုံးအတွက် အချက်အလက်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မူရင်း စက် စာလုံးဝှက်ခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပြီးပြည့်စုံသော လိုက်ဖက်မှု နှင့် အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု ကို သေချာစေသည်။
GravityZone အား physical endpoint များ၊ မိုဘိုင်းစက်များ၊ private နှင့် public cloud ရှိ virtual စက်များ နှင့် Exchange အီးမေးလ် ဆာဗာများကို လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန် virtualization နှင့် cloud တို့အတွက် အခြေခံမှစ၍ တည်ဆောက်ထားသည်။
အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်အား ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရန်
Virtualization ကာကွယ်မှုမှ သင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို မနှစ်မြှုပ်ပါစေနှင့်။ လုံခြုံရေး နှင့် လုပ်ဆောင်မှုတို့မှာ cloud နှင့် virtualized Datacenter များတွင် အတူတည်ရှိနိုင်ကြသည်။ GravityZone သည် တိုင်းတာနိုင်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ၏ အကျိုးရလဒ်များကို မမှေးမှိန်စေဘဲ လုပ်ငန်းများအား အိုင်တီအန္တရာယ်ရှိမှုများအပေါ် ထိန်းချုပ်ရာတွင် ကူညီသည့် နိမ့်ချသော လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ပေးသည်။
ENDPOINT များအတွက် GRAVITYZONE သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်
Bitdefender ၏ Endpoint များအတွက် GravityZone လုံခြုံရေးသည် သင့်တော်ပြီး အလွှာလိုက်ဖြစ်သော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို သုံး၍ အဆင့်မြင့်ပြီး ရှုပ်ထွေးသောခြိမ်းခြောက်မှုများအား တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။ မူပိုင်ဖြစ်သော machine learning နည်းပညာများသည် behavior ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်း နှင့် တိုက်ခိုက်မှုနည်းစနစ်များကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်း တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး GravityZone အား ခြိမ်းခြောက်မှုများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်း၊ ကာကွယ်၊ တားမြစ်ပိတ်ဆို့စေသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ပြောင်းလဲမှုများမှ ပြန်သွားခြင်းအပါအဝင် လုပ်ငန်းများအား ပုံမှန် လည်ပတ်နေစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများကို အလိုအလျောက် လုပ်ယူသည်။
မိုဘိုင်းအတွက် GRAVITYZONE အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်
EXCHANGE အတွက် GRAVITYZONE အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်
Exchange အတွက် GravityZone လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေးသည် အနည်းဆုံး အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူ စိတ်ချရသော စာပို့ခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို သေချာစေသည့် မေးလ် ဆာဗာများအတွက် ထိပ်တန်းဝင် antispam နှင့် antimalware တို့ကို ပေးသည်။
အစီရင်ခံစာ အား ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရန်
“GravityZone က ၎င်းကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အားထုတ်မှုတွေကို ကျောင်းတွေ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိလာဖို့ စီစဉ်ရာမှာ နဲ့ ကူညီရာမှာပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့လိုက်တော့တယ်။”
VIRTUALIZED ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လုံခြုံရေး - အကာအကွယ်ရသော စနစ်များ နှင့် PLATFORM များ
ENDPOINT များအတွက် လုံခြုံရေး - အကာအကွယ်ရသော စနစ်များ နှင့် PLATFORM များ
EXCHANGE အတွက် လုံခြုံရေး - အကာအကွယ်ရသော စနစ်များ နှင့် PLATFORM များ
မေးလ် ဆာဗာများ –
Physical and virtual ဆာဗာများ
မိုဘိုင်း အတွက် လုံခြုံရေး - အကာအကွယ်ရသော စနစ်များ နှင့် PLATFORM များ
VIRTUALIZED ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လုံခြုံရေး - လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း
စုစည်းထားသော datacenter များအတွက် –
Virtual စက် တစ်လုံးချင်းစီအတွက် –
ENDPOINT များအတွက် လုံခြုံရေး - လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း
EXCHANGE အတွက် လုံခြုံရေး - လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း
မိုဘိုင်းအတွက် လုံခြုံရေး - လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း
BITDEFENDER GRAVITYZONE ဆိုတာ ဘာလဲ ?
BITDEFENDER GRAVITYZONE အသစ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
EMalware ၏ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲလာြခင်း နှင့် profession ဆန်လာြခင်း
အကယ်၍ သင် GravityZone Enterprise Security ကိုသုံးစွဲကြည့်ချင်လျှင် ဤနေရာ၌ အလျင်အမြန်အစပြုလိုက်ပါ –